#Digniin Ay soo Saartay Safaarada Soomaaliya Ee Dalka Qadar - Get Latest News From Horn of Africa
#Digniin Ay soo Saartay Safaarada Soomaaliya Ee Dalka Qadar
By axadle On Jan 12, 2019 Last updated Apr 2, 2019
Safaarada Soomaaliya ku leedahay magaalada Doha ee caasimada dalka Qadar ayaa soo saartay qoraal ay bulshada Soomaaliyeed uga digeyso shirkad sheegtay in dad Soomaaliyeed ka shaqaaleesiineyso dalka Qadar.
Safaarada ayaa sheegtay inay ka digayso shirkad la sheegay in fadhigeedu yahay Muqdisho soo saartay Ogeysiis ay bulshada Soomaaliyeed ku ogeysiineyso in ay heeso fiisooyin shaqo oo dalka Qadar ah laguna qaadanayo shaqooyinkaasi mushaar badan.
Qoraalka kasoo baxay xafiiska Safiirka Soomaaliya ee dalka Qadar ayaa si gaar ah loogu ogeysiiyay Jaaliyada Soomaaliyeed ee kunool Qadar iyo dadka ku dhaqan Muqdisho in aysan ku khaldoomin Ogeysiis been abuur ah oo lagu faafiyay baraha bulshada.
Safaarada Soomaaliya ee dalka Qadar ayaa ku wargalisay laamaha amaanka Soomaaliya in ay ka hortagaan Ogeysiiskan been abuurka ah ee la doonayo in dadka Soomaaliyeed looga qaatao lacago.
Halkan ka AKhriso Qoraalka kasoo baxay Safaarada Soomaaliya ee dalka Qadar.